Flower Blossoms Spring Clock အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（25.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Flower Blossoms Spring Clock
Spring 4K Live Wallpaper များ
သည် HD နောက်ခံ, နာရီ, Magic Touch, Emoji, Emoji, Emoji, 3D နောက်ခံပုံများ, ကာတွန်းပန်းပွင့်များနှင့်အခြားအရာများပါ0င်သည်။
🌸 Free Live Wallpapers
ပန်းပွင့် Blossoms close close close close close close count flower and sakura images, sakura imagespape, Pink Flowe HD နောက်ခံအမျိုးမျိုးရှိသည့်ရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့် Changer, ဘောင်, ကာတွန်းပန်းပွင့်အပွင့်, မှော်ထိတွေ့ခြင်း, Antoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, free scree လုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပါ။
HD Live Wallpapers များသည် Samsung Galaxy ဖုန်းများကဲ့သို့သော Android ဖုန်းများအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး Oppo ဖုန်းများနှင့်အခြားသူများအတွက် PADROMI နောက်ခံပုံများ, ပန်းပွင့်များနာရီနှင့်ပန်းရောင်ပန်းပွင့်နှင့် Sakura HD နောက်ခံကားများသည်တက်ဘလက်များ၌ပါ0င်သည်။
childs, frames, emoji, animated ပန်းပွင့်များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးပါ နောက်ခံ chother ကိုမှော်အတတ်ကိုထိတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကို 3D နောက်ခံပုံများ (သို့) 4D နောက်ခံပုံများ (parallax အကျိုးသက်ရောက်မှုပါသည့် parallax နောက်ခံပုံ) ကိုပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်သော့ခတ်မြင်ကွင်းတွင်ပါ0င်သည်။
ပန်းပွင့်လန်းလ်) ပန်းရောင်ပန်းပွင့် 3D နောက်ခံပုံသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံ။ parallax နောက်ခံပုံ 3D အနက်နှင့်သင်၏ screen နှင့်ပန်းရောင်ပန်းပွင့် wallpapers ရှိပါတယ်!
🌸 အခမဲ့နောက်ခံအမျိုးမျိုးကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံများကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။ သင်မှော်ထိတွေ့မှုနှင့်အလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲသွားသောအလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
front blossoms နာရီကိုဓာတ်ပုံ frames ဓါတ်ပုံတွေကို Lock screen ရှိကာတွန်းပန်းပွင့်ကိုပြောင်းပါ။ 💖မှော်ထိတွေ့မှု (အရောင်အမှုန်နှင့်အသံ) ကိုထည့်ပါ live wallpaper များကို 3D နောက်ခံပုံများသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံများ (Parallax Wallpaper)
ပန်းပွင့်လွင့်စင်တာများအားလုံးကို add blossoms cloud texp add
ပန်းပွင့်လန်းလ်ရိုက်ကူးပါ Android ဖုန်းနှင့်မကြာခဏအေးမြသောနောက်ခံအကြောင်းအရာများ!
အကောင်းဆုံးနောက်ခံပုံများဖြင့်အကောင်းဆုံးနောက်ခံပုံများကိုအခမဲ့ရယူပါ။ HD Wallpapers app တွင် Wallpapers app တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Mobile Wallpaper Apps! Wallpaper hd ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ 🕙, သင်၏အမည် em, emoji animations 🆕, emoji ကာတွန်း👉, emoji ကာတွန်း👉, အမှုန် HD Theme ✨, အခြားတိုက်ရိုက် wallpapers:
href =" https://play.google.com/store/apps:/detafs=Spose .Petal.Clock.clock.clock.cretious ">
ပန်းပွင့်များ Blossoms close close close close
samsung galaxy (သင်ဤ HD Live Wallpapers ကိုထည့်နိုင်သည်။ J7 Prime), Xiaomi, Huawei, LG, Lenovo, Sony, Pixel, HTC, HTC, HTC, HTC, ASIZU, Motorola, Nexus နှင့်အခြားသူများ! 😊